Soo Celinta Xogta, Soo-kabashada Faylka iyo Soo-kabashada Email-ka Software ee DataNumen
Waxyaabaha Soo-kabashada Xogta Soo-kabashada Xogta
Waxaan ku siinaa barnaamijka abaalmarinta ee soo kabashada xogta abaalmarinta ee faylasha MS Office, dib u soo kabashada emaylka, keydinta iyo faylasha keydka, keydadka, sawirrada iyo dukumiintiyada, iyo kuwo kaloo badan.
Liiska alaabta oo dhameystiran
Diiwaanka / Kaabta
Sawir / Dukumiinti
Ku soo DHAWOOW DataNumen
DataNumen waa hogaamiyaha adduunka ee teknoolojiyada soo kabashada xogta. Waxaan bixinaa xalal soo kabashada xogta oo ay kujiraan alaabteena softiweerka kabashada xogta abaalmarinta, adeegyada soo kabashada xogta xirfadlaha ah, iyo xirmada horumarinta softiweerka (SDK) ee loogu talagalay horumariyeyaasha.
Wax soo saarkaaga ayaa ugu fiicnaa oo wuxuu sameeyay most! Laakiin uma maleynayo inay wax soo ceshan karaan xogta aan lost. Waxay soo ceshatay wixii aan horey u haystay, taas oo ka badneyd
Wax soo saarkaaga ayaa ugu fiicnaa oo wuxuu sameeyay most! Laakiin uma maleynayo inay wax soo ceshan karaan xogta aan lost. Waxay soo ceshatay wixii aan hore u haystay, taas oo ka badnayd badeecadihii hore, laakiin midkoodna 3.5 toddobaadyadii xogta ahaa ee maqnaa. Haddii aan u maleynayay in xogta maqan ay jirto, waxaan hubaa inaan bixin lahaa $ 50 si aan dib ugu soo cesho, iyo MAYBE $ 100 haddii aan Qumman yahay in dhammaan xogta la la'yahay ay jirto. Laakiin ma ahayn, sidaa darteed uma qalmin $ 100.
Marwo Mascha Fujimoto
Barnaamij aad u fiican, iyo taageero macaamiil oo aad u fiican (oo ka mid ah taageerada macaamiisha ugu fiican ee aan soo maray).
Waxaan u isticmaalayay Muuqaalka 2010 kii iigu dambeeyay
Waxaan ku isticmaalayay Muuqaalka 2010 kumbuyuutarkaygii ugu dambeeyay, ee maamuli jiray Windows 7. Kumbiyuutarkaas wuu dhintay, nasiib wanaagse, waxaan taageeri jiray dhammaan feylahayga (oo ay kujiraan faylasha Outlook pst) oo kusocda banaanka. Laakiin waxaan ilaaway erayga sirta ah ee faylka sirta ah ee pst oo ka kooban 14.5 GB e-mayl iyo lifaaqyo (qiyaastii toddobo sano oo iimayl ah, qaarkoodna aad muhiim iigu yihiin).
Waxaan soo dejiyey nooca tijaabada ah DataNumen Outlook Password Recovery (inaan lagu khaldin Dayactirka Muuqaalka ama Muuqaalka Drive Drive) iyo starsocodsiiyay hawsha dib u soo kabashada, laakiin waan joojiyay hawlgalkii markii ay bilaabatay ka dib si aan ugu nuqulo faylka faylka loo duubay oo ah meel kale si aan u hubiyo inaan haysto keyd (waxaan ilaaway inaan mar hore keyd ku lahaa diiwaanka fayladayda). Taas ka dib, mar labaad ma isticmaali karin nooca tijaabada ah.
Waxaan iibsaday nooca buuxa, laakiin ma jirin waddo aan ku geli karo aqoonsigeyga isticmaale iyo koodhka qaybta tijaabada marka la raaco tilmaamaha si loogu beddelo nooca tijaabada nooca buuxa. Markaa emayl baan diray DataNumen. Qiyaastii 12 saacadood gudahood, waxay iigusoo direen xiriiriye soo degsiis ah oo loogu talagalay nooca buuxa, waxayna i fareen inaan ka saaro nooca tijaabada ah ka dibna aan rakibo nooca oo buuxa.
Wax dhib ah kuma qabin in aan tirtiro nooca tijaabada ah isla markaana aan rakibo nooca buuxa (nooca 1.2.1.0), waxaanan si deg deg ah ku helay lambar sir ah oo aan ku geli karo feylka sirta ah ee pst.
Waxaan marlabaad socodsiiyay qaliinka si aan u arko inta ay qaadatay. Barnaamijku wuxuu fayl galiyay faylkayga pst hal daqiiqo iyo 47 ilbidhiqsi.
Dhacdadan, dhowr faylal kale oo pst ah oo ku yaal galkayga 'Outlook Files', sida feylasha la keydiyey, lama keydin. Ma xasuusan karo sidaan uqariyey faylkan pst. Waa inaad isticmaashaa nooca tijaabada ah (waad isticmaali kartaa hal mar) si aad u hubiso in feylka pst ee aad u baahan tahay inaad marin u hesho uu yahay mid sir ah.
Waxa ugu dambeeya ee la xuso: Wax fikrad ah kama haysto in nooca tijaabada ahi uu soo saari lahaa feylasha pst ka weyn kan tan, ama in cabirka faylka uusan khusayn nooca tijaabada.
Barnaamijkani waa badbaadiye, iyo taageerada macmiilku waxay ahayd mid aad u fiican (10 marka loo eego 1 ilaa 10). Waxaan hadda ka soo kabsaday toddobo sano oo email ah. Lama rumaysan karo!
Nasiib wacan barnaamijyadaada. Way yar yihiin waxayna qabtaan sida saxda ah.
Interface waa fududahay in la raaco oo la fahmo. Aniga
Interface waa fududahay in la raaco oo la fahmo. Waxaan idinka sugayaa barnaamijyo cusub oo dheeri ah.
Agaasimihii Isbitaalka Hawlgab ee IT
Waad ku mahadsan tahay caawimadaada.
Codsiga wuu shaqeeyaa Saldhiggu sidoo kale waa caadi.
Diisambar 23th, 2020
Muuqaalka ayaa xumaaday, isla markii Windows cusbooneysiiyay barnaamijkeyga Emailka Muuqaalka ayaa joojiyay shaqadii. Waan isticmaalay datanumen alaabta si dib loogu habeeyo emaylka
Muuqaalka ayaa xumaaday, isla markii Windows cusbooneysiiyay barnaamijkeyga Emailka Muuqaalka ayaa joojiyay shaqadii. Waan isticmaalay datanumen alaabta si dib loogu habeeyo fayllada emaylka si sax ah oo ay u shaqeysay. Waxa kaliya ee ay ahayd in aan sameeyo ayaa ahaa socodsiinta barnaamijka si aan u hagaajiyo xogta, waxaan u beddelay magaca faylka xogta iyo socodsiinta Muuqaalka. Presto way shaqaysay Mahad badan
Iskii u shaqayste
Waxaan la dhacsanahay sahlanaanta isticmaalka iyo soo kabashada degdegga ah ee faylka. Dhamaantiis, uma baahni mar dambe, sidaa darteed waan furey kadib laba feyl
Waxaan la dhacsanahay sahlanaanta isticmaalka iyo soo kabashada degdegga ah ee faylka. Dhamaantiis, uma baahni mar dambe, sidaa darteed waan furey ka dib markii laba faylal dib loo helay
Leioa, Bizkaia, Isbaanish
Waad ku mahadsantahay badeecada dadka yaryar ee dhibaatada weyn qaba.
Waxaan adeegsaday dayactirkaaga Muuqaalka.
Saynisyahan hawlgab ah
Wanaagsan, cabsi badan.
Hadday uun dad kale sidan wax ku ool noqon lahaayeen.
RAR faylka 115 GB: gebi ahaanba waxyeello ...
Barnaamijkaagu wuxuu ku hagaajiyay 5 saacadood iyo 33 daqiiqo ...
1K mahadsanid !!
SDK loogu talagalay Soo-saareyaasha
Qalabkeena horumarinta softiweerka (SDK) ayaa kaa caawin kara inaad dhexgashid tiknoolajiyadayada soo kabashada xogta aan lala midka aheyn ee barnaamijkaaga si habsami leh.
Liiska macaamiisha oo buuxa